सर्वतः गर्मीको सर्वोत्तम पेय | सुदुरपश्चिम खबर
चर्को घाम, तातो हावा, हपहपी गर्मी । पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको बेला तपाईंलाई तिर्खा लाग्छ नै । यस्तो बेला तपाईंलाई लेकको चिसो पानी घटघट पिउन मन लाग्दो हो । जमिनको मुल फुटेर निस्किएको चिसो पानीले आँतलाई कम्ता सितल बनाउँछ ?
तर, यस्तो पानी कहाँ पाउनु ? बोत्तलबन्द पानीले जो बजार पिटेको बेला । हुन त तिर्खा मेट्ने अनेक विकल्प छन्, शहरमा । तपाईं ‘चिसो–चिसो कुल–कुल’ कोकाकोला, फ्यान्टा वा यस्तै अरु पेय घुट्क्याउन सक्नुहुन्छ । तर, यी पेयले तिर्खा नमेट्ने मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई फाइदा पनि गर्दैन । बजारमा उपलब्ध यस्ता कृतिम पेय पिउनुभन्दा आफ्नै घरमा, आफ्नै हातले बनाएको सर्वत पिउन बढी लाभदायक हुन्छ ।
सर्वत बनाउन न समय लाग्छ, न श्रम । न पैसा खर्च हुन्छ, न स्वास्थ्यलाई बेफाइदा । गर्मीमा यो भन्दा सर्वोत्तम विकल्प अरु के हुनसक्छ ?
अहिले हामी पानीलाई चिस्याउन फ्रिजमा राख्ने गर्छौं । जबकी फ्रिजको पानी पिउन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन । अर्कोतिर सर्वत बनाउनका लागि आवश्यक पानी चिसो हुनुपर्छ । चिसो पानीकै सर्वत बनाएर पिउँदा बढी स्वाद हुने हो । अतः पानीलाई प्राकृतिक रुपमा चिसो बनाउनका लागि माटो, तामा र पित्तलको भाँडो÷गाग्रीमा पानी राख्ने गरिन्छ । माटो तथा तामा र पित्तल जस्ता धातुको भाँडामा राखिएको पानी यसैपनि स्वास्थ्यवर्द्धक हुन्छ ।
हाम्रा पितापूर्खाले मौसम एवं समय अनुसार कस्तो खानपान खाने, कसरी खाने भन्ने संस्कारको विकास गरे । यसलाई उनीहरुले धर्मसँग जोडिदिए, जसले गर्दा यस्ता संस्कारलाई पुस्तौ–पुस्ताले अंगाल्दै जानेछ ।
वैशाख अक्षय तृतीयाका दिन जौको सातु र सर्वत दान गर्ने धार्मिक परम्परा पनि छ । यसदिन सख्खर र महको सर्वत तथा जौको सातु दान गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धार्मिक विश्वास के छ भने, यस दिन गरिएका सबै सत्कर्म अर्थात राम्रो कामबाट अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ । अक्षयको अर्थ कहिल्यै क्षय नहुने भन्ने हो । (अनलाइनखबर बाट सभार)